YOUNGBOI နှင့်တွေ့ဆုံပါ။ မိန်းကလေးများအားလုံးကိုရရှိသည့်ကလေးနှင့်မျက်နှာထားသည့်ကျောင်းသား - သတင်း
Youngboi နှင့်တွေ့ဆုံပါ။ မိန်းကလေးများအားလုံးကိုရရှိသည့်ကလေးနှင့်မျက်နှာထားသည့်ကျောင်းသား
မည်သည့် uni ပရဟိတလုပ်ငန်းဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းကိုမဆိုသင်၏မျက်စိကြည့်လိုက်ပါ။ သင်ဟာရပ်ဂ်ဘီယောက်ျားလေးများနှင့်ပုဂ္ဂလိကပညာတတ်များရှေ့နေရှေ့နေများရဲ့သီးနှံများကိုမြင်တွေ့ရလိမ့်မည်။ သို့သော်ရပ်စယ်လ်အုပ်စု၏ပင်ပန်းသောအပူပိုင်းဒေသတွင်ကြယ်တစ်လုံးမွေးဖွားလာသည်။ အဆိုပါ youngboi ၏မြင့်တက်မှုအတွက်အဆင်သင့်ပြင်ဆင်ပါ။
ပါးနပ်စွာတုပ။ ပါးလွှာသောအသားအရေနှင့်ကြည်လင်ပြတ်သားသောအသားအရေ Proactiv သည်ကျန်တဲ့ uni ယောက်ျားလူ ဦး ရေအတွက်မျှတမှုရှိနိုင်သလားဆိုတာကိုတစ်မိနစ်လောက်စဉ်းစားမိသည်။ မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းသူတို့မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုမည်သည့်မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်ပတ်သက်သည်ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းထားသောယောက်ျားလေးများ၊ သူတို့ဘယ်ကစားနည်း၊ သူတို့က 1975 မှအော်ဟစ်ဘယ်လောက် ။
သူသည်ရှည်လျားသောအင်္ကျီလက်ထိပ်များအိတ်များအောက်တွင်သူသည်မည်သည့်ကြွက်သားမျှမရရှိနိုင်ပါကသင်မသိပါ။ သို့သော်သင်လိုချင်သည်။ သူကလိင်တူချစ်သူဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူကခင်ဗျားကိုအမြွှာတစ်ယောက်လို့ခေါ်တယ်။ ဒါပေမယ့်သူကလိင်တူချစ်သူမဟုတ်ဘူး။ ဒီမိန်းမရဲ့သွင်ပြင်လက္ခဏာကသူ့လမ်းကိုမရောက်နိုင်ဘူး။
@myiefranks98 သည်သူ၏ bday x တွင်ချစ်စရာကောင်းသောရှာဖွေတွေ့ရှိ @
မျှဝေသည် Theodore Osborne (@_theo_osborne) 11:42 pm တွင် PST မှာဒီဇင်ဘာလ 14, 2018 ရက်တွင်
သင်နည်းနည်းနေမကောင်းနေ, ရိုးသားကြပါစို့ ketamine သည်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၏စရိုက်လက္ခဏာဖြစ်သည်ဟုယူဆသောတုန်လှုပ်နေသော litbois ။ အဆိုပါ yungboi သည်သူ၏ပိုပြီး alpha အိမ်ထောင်ဖက် '' braggadocio ၏အရိပ်ထဲမှာအငြိမ့်အမြဲရှိခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်ယခုမှသာသင်သူ့ကိုသတိပြုမိစတင်ပါပြီ။ အတော်လေးပှငျ့ပှငျ့လပှငျ့လငျးလငျး - မကြာမီသင်ဖြစ်နိုင်နည်းပြကိန်းမှာဆa္ဌ - ဟောင်းအဖြစ်ရှောက်သွားနိုင်သူတစ် ဦး ကောင်လေးတစ်ယောက်နှင့်အတူရတဲ့နည်းနည်းလိုက်တယ်ခံစားရရန်စတင်ပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကသူ့အချိန်ရဲ့ - အတော်လေးပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး - သူကရယူသင့်ပါတယ်။
ယခုအချိန်အထိ uni ယောက်ျားလေးများအပေါ်မျက်နှာဆံပင်သည်နှစ်ပိုင်းခွဲခြားထားသည် - ပထမတစ်ခုမှာသူတို့ငါးနှစ်အရွယ်ကစပြီးရုတ်တရက်မုတ်ဆိတ်မွှေးဖြစ်သည်။ ဒုတိယတစ်ခုမှာမျက်နှာ၏အရက်ဆိုင်များ၊ ယခင်။
Sam Plant မှ @samplant_ မျှဝေသည်။ 1:00 pm တွင် PDT မှာဇူလိုင်လ 22, 2017 တွင်
အပျိုဖော်ဝင်ခြင်းသည်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သောသခင်မဖြစ်နိုင်သည်ကိုနားလည်သည်။ သူကဒီဇိုင်းအမှိုက်ဟာသူ့သုံးဆယ်နှစ်လယ်ပိုင်းအထိသူ့ကိုရှောင်ရှားလိမ့်မယ်သိတယ်, ဒါပေမယ့်သူကသူ့ကိုနှောင့်အယှက်မပေးပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲသိလား ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့အသားအရေဟာအရမ်းကိုရှင်းလင်းပြီးကောင်းမွန်ပြီးစိုစွတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သင်ဟာမဲခေါင်းတစ်လုံးရှာတာထက်ထီထိုးမယ်။
သူ၏အိတ်များကသူ့ကိုရှုပ်ထွေးစေ။ သူ့ကိုလုပ်စေသည် ထူးဆန်းသော
အဆိုပါ yungboi ကြွက်သားလား? ဘယ်သူသိနိုင်မလဲ? သူကအားကစားခန်းမထဲကိုမသွားဘူး။ သူကဘဝရှိတယ်ဆိုတော့သူကကြမ်းတမ်းတဲ့ကြွေထန်းလက်တွေကိုပျက်စီးစေနိုင်တယ်။ သူကအားကစားတစ်ခုလုပ်ရင်ခရစ်ကတ် (သို့) ကြက်တောင်လိုမျိုးပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနည်းတယ်။ သူသည်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုသင်တို့ကိုနံရံမှနံရံသို့ပစ်ချလိမ့်မည်မဟုတ်သော်လည်းသူ၏လျော့ပါးသွားမည်ဖြစ်သလိုရှည် - လက်ရှည်ထိပ်၏အိတ်နှင့်တူသောမျက်နှာစာအောက်၌သင်တို့ကိုသူသူတော်တော်လေး stacked ရဲ့ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ပီတိအံ့သြသွားနိုင်ပါတယ်။
BOIIIII • # timotheechalamet # liltimmytim # callmebyyourname # peachscene # elioperlman # elioandoliver # cmbyn # loveislove # chalamet # timothee # သရုပ်ဆောင် # model # likeforlike
မျှဝေသည် Timothy Hal Chalamet 5:50 pm တွင် PDT မှာ5ပြီ 13, 2018 ရက်တွင် (@peachytimothy)
စာရွက်ငယ်လေးကိုသူအရမ်းဂရုစိုက်မိသည်ကိုသူမြင်ရလိမ့်မည်။ သူကြည့်လိုက်သည့်အခါသင်၏မျက်စိနှင့်တွေ့သောအခါသူ၏ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းအလေ့အထကသူ့ကိုအလွန်နည်းပါးစေသောတစ်ခုတည်းသောအရာဖြစ်သည်ကိုစဉ်းစားလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သင်ဤ rollie ခဲ့ကြသည်ဘယ်လိုဆန္ဒရှိအပေါ်စဉ်းစားပါလိမ့်မယ်။
sadboi နှင့်မတူသည်မှာ yungboi (သင်ကံကောင်းသင့်ပါက) သည်သုံးပတ်သက်တမ်းရှိသောညစ်ပတ်နေသောအဝတ်အစားများကိုကျော်နင်းရန်သင့်အားမလိုအပ်ပါ။ သငျသညျထူးဆန်းပုံး ဦး ထုပ် peep လိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်သင်ကနောက်တစ်နေ့ကသင်၏ဘောင်းဘီကိုရှာဖွေဒြပ်သမုဒ္ဒရာမှတဆင့် rummage ရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်။ သူသည် Pulp Fiction ပိုစတာကိုကြည့်နေစဉ်သို့မဟုတ်သူမသည်သူမ၏ Bum နှင့်အတူတင်းနစ်မိန်းကလေး၏စိတ်ပျက်ဖွယ်မြင်ကွင်းအောက်တွင်သင် coitus လက်အောက်ခံလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ သူ၏ပိုစတာများကိုမူပုံဖော်ထားသည် - သူ့အခန်း၌ပင်စက်ရုံတောင်ရှိနိုင်သည်။ အဲဒီမှာသူဘယ်တော့မှစားမှာမဟုတ်ဘူး။
မျှဝေသည် Kit Paterson (itkitpaterson) ဇန်နဝါရီလ 17, 2019 ရက် 4:00 pm တွင် PST မှာ
နူးညံ့သိမ်မွေ့စွာအတူတကွစုဝေးနေသောကောင်လေးတစ်ယောက်သည်လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်အခြားယောက်ျားတစ် ဦး နှင့်တကယ့်ရန်ပွဲမဟုတ်ဘဲလေပြင်းတိုက်ခတ်မှုဖြစ်နိုင်သည်ကိုသင်မကြာခဏသင်စိုးရိမ်နေသည်။ သူ့ကိုအကုန်လုံးအကာအကွယ်ပေးရမယ်။ yungboi ကသူဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာမင်းသိတယ်၊ မင်းမိခင်ဗီဇအတိုင်းလှုပ်ရှားလာပြီဆိုတာနဲ့သင်ဆုံးရှုံးသွားပြီ။ ယခုမှ စ၍ လာမည့်လပြည့်အထိမင်းရဲ့ခံစားချက်တွေကဒီပါးလွှာသောပါးနပ်သောမျက်နှာသွင်ပြင်၌ရှိနေသည်။
သငျသညျသူ၏မျက်တောင်ချင်ပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်သင်လည်းလိမ့်မယ် လိုချင်တယ် သူ၏မျက်တောင်
နတ်ဝိဇ္ဇာအတတ်အားဖြင့် yungboi သည်မနာလိုစိတ်ကိုလိုလားတောင့်တမှုအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲရန်ရေငတ်သည့်ငွေကြေးအမျိုးအစားတစ်မျိုးကိုလေ့လာခဲ့သည်။ သူမမျက်လုံးတစ်စုံကိုကိုယ့်အတွက်ယူပြီးသူနှင့်အတူရရန်ကြိုးစားခြင်းနှင့်အငြင်းအခုံလုပ်နိုင်သည်။ သံသရာရက်စက်ကြမ်းကြုတ်စွာဆိုးသည်။
သူကသူ့ (အံ့သြဖွယ်) အသားအရေအတွက်အလွန်အဆင်ပြေပါတယ်
သငျသညျသူ့ကိုတညဉ့်လုံးနာခံချင်ပါတယ်လိုပဲ, သင်သူ့ကိုနာခံစေချင်ပါတယ်လျှင်မှတ်ချက်ပေး ???????
မျှဝေသည် Kit Paterson မော်ဒယ်ပရိတ်သတ်တွေ 12:10 pm တွင် PST မှာဒီဇင်ဘာလ 29, 2017 ရက်တွင် (itkitpatersonfansofficial)
Yungboi သည်ဘောလုံးပြောင်းလဲသည့်အခန်း၏ထောင့်သို့ကျုံ့သွားခြင်းသို့မဟုတ်အရွယ်အစားနှစ်ဆရှိသောရပ်ဂ်ဘီကစားသမားများနှင့်မကြည့်နိုင်ခြင်းဖြစ်သော်လည်းသူသည် The Boys ၏အတည်ပြုချက်ကိုရယူရန်အာရုံစိုက်ရန်လိုအပ်ကြောင်းလည်းမခံစားရပါ။ ™။ အဆိုပါ yungboi ရဲ့လျှို့ဝှက်လက်နက်သည်သူတို့ကိုမှာမိမိမျက်စိလှိမ့်ခြင်းမရှိဘဲအထီးခင်မင်မှု၏ဒစ် - လွှဲပြိုင်ပွဲ၏မိမိကိုမိမိလွတ်မြောက်ရန်သူ၏စွမ်းရည်ဖြစ်ပါတယ်။
သငျသညျသူ့ကိုအကြောင်းကိုသူ့ထိပ်တန်းဝှေ့ယမ်းသည့် dancefloor ၏အလယ်ဗဟိုတွင်မဟုတ်ဘဲဘားဆန့်ကျင်မြှောင်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျကျော့မိပါလိမ့်မယ်, ဒါမှမဟုတ်ပင် snaring လုပ်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်မှာဤနေရာဖြစ်သည်။ အဆိုပါ yungboi ခြေနင်းသည်မည်သည့်ခြေထောက်စိတ်ထဲမထားဘူး: သငျသညျသူ့ကိုယူသို့မဟုတ်သူ့ကိုစွန့်ခွာ (သင်သူ့ကိုယူပါလိမ့်မယ်) ။
လူတွေဟာသူဟာယောက်ျား - ကလေးလိုလို့ပြောရင်မင်းအဲဒါကိုလျစ်လျူရှုတယ်
သူဟာနည်းပညာပိုင်းအရကလေးတစ်ယောက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာသင်သိပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့အသက် ၁၈ နှစ်အောက်မည်သူ့ကိုမှအရိုးဖွဲ့စည်းပုံကမဖြစ်နိုင်တာပါ။ ဒါပေမယ့်သူကဒေသတွင်းရုံးမှာ ID'd လုပ်တိုင်း Smirnoff ပုလင်းတစ်လုံးကို ၁၅- နှစ်လောက်ရောင်းလိမ့်မယ်။ အကူအညီတောင်းသင့်သလား၊ ဒါမှမဟုတ်ဖေဖေတို့ဆီကိုကြိုးစားသင့်မသင့်လားဆိုတာကိုသင်စဉ်းစားနေမိပြီ။
သူ၏အကျိုးစီးပွားများမှာအလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းပြီးသင်၏ Instagram ကိုလက်ဝါးကြီးအုပ်နိုင်သည်
သူကဘောလုံးသမားလား။ မဟုတ်ဘူး။ သူဖတ်တယ်။ သူကသင့်ရဲ့ပထမ ဦး ဆုံးနေ့စွဲ, သင်၏ဒုတိယများအတွက်ပြခန်းများအတွက်လက်မှုပညာကဖေးသို့သငျသညျယူပါလိမ့်မယ်။ သင်လိုချင်သောအရာဟုထင်သောကြောင့်သင်သည်သည်းထိတ်ရင်ဖိုအားကြည့်ရှုနေသည့်အရက်ဆိုင်၌ပြတိုက်လက်ဆောင်ပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်၌သင်ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းမရရှိနိုင်ကြောင်းသတိမပြုမိမီသင်ကသင်လိုချင်သောအရာဟုထင်သောကြောင့်သင်သည်းခံနိုင်လိမ့်မည်။
အဆိုပါ yungboi ရဲ့ချစ်ခင်ရောက်ရှိဖို့၏စိန်ခေါ်မှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမိန်းကလေးအိမ်ထောင်ဖက်သူ၏ harem ထိုးဖောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူကအင်္ဂလိပ်စာကိုလေ့လာတာ၊ ထိုသူအပေါင်းတို့ကသူ့ကိုဖန်စီသူတိကျစွာသူတို့ထဲကသုံးခုနဲ့ရပါတယ်။ သူတို့ရဲ့သူတို့ရဲ့သူတို့ရဲ့ရဲရဲတင်းတင်းနဲ့သူတို့ရဲ့သူတို့ရဲ့ရဲ့အရှက်တကွဲဖြစ်မှုနဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်တိုတို့နဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်တို့နဲ့မကျေနပ်မှုတို့နဲ့အတူတူ။
မျှဝေသည် Theodore Osborne 10:58 pm တွင် PST မှာဖေဖော်ဝါရီလ 14, 2019 ရက်တွင် (@_theo_osborne)
သူ၏အိတ်နှင့်တူသောအဝတ်၏လျှို့ဝှက်ချက်နှင့်အညီလူငယ်ဘွိုင်သည်ဝတ်လစ်စလစ်များကိုမပို့ပါ။ WhatsApp ကိုပရောပရည်လုပ်ခြင်းဖြင့်ငါးမန်းကိုအတောမသတ်ပစ်မည့်အစားသူသည်သင်မှတ်စုနှစ်ခုအတွက်မသွားမီသင့်မှတ်စုများစာမျက်နှာတွင်သိမ်းဆည်းထားသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမာရွတ်များကိုစွန့်လွှတ်လိမ့်မည်။ သူနှင့်စကားပြောခြင်းသည်အလွန်ပြင်းထန်သည်၊ ၎င်းသည် ASMR ဗီဒီယိုတွင်ကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ မင်းကသူ့ကိုမိခင်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့မင်းထင်ခဲ့တယ်၊
နောက်ဆုံးမှာသူဟာသူကပရဟိတလုပ်ငန်းတွေမှာသူမရဲ့ uni ဝတ်ဆင်မှုတွေကိုပြသတဲ့အတွက်သင်ငြီးငွေ့လာလိမ့်မယ်၊ ဒါမှမဟုတ်သူဟာအသက် ၃၀ မှာကြီးပြင်းလာတဲ့အထိမုတ်ဆိတ်မွေးတွေကိုစွန့်လွှတ်လိုစိတ်ရှိမရှိမေးခွန်းထုတ်ရလိမ့်မယ်။ မိန်းကလေးတိုင်းသည်သူ၏အကောင်းဆုံးအိမ်ထောင်ဖက်ကဲ့သို့ပြုမူဆက်ဆံခြင်းကို ခံရ၍ သင့်အားမျက်နှာလွှဲမည့်ကောင်လေးတစ်ယောက်ကိုကောင်လေးဆီခေါ်သွားသည်။ မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆိုလူငယ်ဘွိုင်ကာလသည်ကြာရှည်မည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်ခမ်းနားထည်ဝါလှသောယောက်ျားလေးများ၏ရေကန်ထဲနှစ်မြှုပ်ရန်အချိန်အနည်းငယ်ရှိပါကယခုပင်ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
သင်၏မိန်းကလေးတစ် ဦး လျှင်သင်ကိုယ်တိုင်မည်သို့ကစားရမည်နည်း
• Litboys သည် fuckboy ၏အကြွင်းမဲ့အဆိုးဆုံးဖြစ်သည်
•ဤတွင် Strongbow Dark Fruits Boy ဖြစ်ပြီး, သူသည် 2018 ခုနှစ်တွင် banter ဆောင်ခဲ့ပါတယ်
•လူတိုင်းကသူတို့ဘ ၀ မှာ Fiat 500 မိန်းကလေးလိုတယ်